FANADIHADIANA MANOKANA. FILOZOFIA ENS AMPEFILOHA | Madatopinfo
FANADIHADIANA MANOKANA. FILOZOFIA ENS AMPEFILOHA
“Mahatafavoaka mpianatra betsaka noho ny eny Ankatso”
Vokatry ny fanadihadiana manokana nataon’ny mpanao gazetin’ny Madatopinfo-France tamin’ny fampianarana Filôzôfia roa tonta eto Antananarivo. Ka nahitana fa vitsy ireo tafavoaka eny amin’ny Anjerimanontolo Ankatso raha mitaha amin’ny eny Ampefiloha.
Ramatoa Marie Olga Razaiarisoa, izay manam-pahaizana manokana nivoaka avy tamin’ny Oniveriste Grenoble Stendhal France, no mpiandraikitra ny zotram-piofanana fampianarana filôzôfia eo anivon’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) Ampefiloha. Ity mpampianatra Maître de Conférence amin’ny Oniversiten’Antananarivo ity no mpiandraikitra voalohan’ity sampam-piofanana ity hatramin’ny nanokafana azy efa-taona lasa izay. Nanomboka tamin’ny rafi-pampianarana vaovao LMD (Licence Master Doctorat), dia nisokatra ny taranja hafa ankoatra ny efa teo amin’ ny ENS Ampefiloha, ka ny Filôzôfia izay nampiavaka an’ny Toliary sy ny Matematika an’ny Fianarantsoa no anisan’ny nanatevina izany. Tamin’ny taom-pianarana 2013-2014 no nisokatra ny sampana filôzôfia teo amin’ny ENS Faritanin’ Antananarivo.
Amin’ity taom-pianarana ity dia efa hiditra amin’ny dingana “Master” ny mpianatra voalohany nisafidy ny taranja “Fitiavana ny Fahendrena” na ny “Philia Sophia”, araka ny teny Grika. 27 izy ireo telo taona lasa izay ary mahatratra 13 no tafita aty amin’ny famaranana ny L3S6 (Licence3, Semestre6). Raha mitaha amin’ny eny amin’ny Oniversite Ankatso ity fampiofanana filozôfia an’Ampefiloha ity , dia mahatafita betsaka satria raha 50 mahery no voaray amin’ny taona voalohany (L1S1) dia mazàna eo amin’ny 15 eo no zara raha tafavoaka ny L3S3 eny Ankatso, raha ny fanadihadiana izay nataon’ny mpanao gazetinay teny amin’ny Departemantan’ ny Filôzôfia teny Ankatso. “Noho ny antony fahitana asa avy hatrany aza no mahatonga ny mpianantry ny ENS mitsoaka an-daharana fa tsy resaka tsy fahaizana na antony hafa”, hoy ny mpiandraikitra voalohany, Marie Olga Razaiarisoa.
Malalaka ny tsenan’ny asa
Tsy olana ho an’ny mpianatra ao amin’ny ivon-toeram-piofanana ho mpampianatra Ampefiloha tokoa mantsy ny resaka fitadiavana asa. Ankoatra ireo efa manana tetikasa manokana tahaka ny fananganana sekoly tsy miankina sy ireo izay te hiantsehatra amin’ny toeran-kafa dia manana tombondahiny manokana ho lasa mpiasam-panjakana ny mpianatra mivoaka amin’ny Ivom-piofanana ENS toy izao. “Efa nampanantena ny Minisitry ny Fanabeazam-pirenena ankehitriny fa atao loharaharana horaisina ho mpampianatra mpiasam-panjakana ireo rehetra nivoaka amin’ny ENS. Hisokatra ihany koa moa ny “Master” sy ny “Doctorat”, hany ka mahazo vahana amin’ny sehatry ny asa ankoatra ny fampianarana amin’ny Lisea ny mpianatra eto Ampefiloha”, hoy hatrany ny mpiandraikitra, Marie Olga Razaiarisoa, Maître de conférence eo amin’ny Oniversite an’Antananarivo. Mihoatra ny zato ireo manampaniriana hiditra ao amin’ny ENS, sampana filôzôfia, amin’izao fiomanana amin’ny taom-pianarana vaovao izao. Tsy misy olana ny fotodrafitrasa hatreto ho fandraisana azy ireo, araka ny fivoriana niarahan’ny tomponandrikitra tamin’ny mpiahy ny fianarana eo an-toerana. Rehefa hiara-mianatra anefa ireo mpianatra aman-jatony avy amin’ny taranja : Malagasy, Anglais, Fratsay, Serasera, Filôzôfia (Tronc commun) afaka taona vitsy dia ilàna fanitarana ihany ny fotodrafitrasa.
Misy fanomanana manokana hampianatra ireo mpianatry ny ENS, ka misy dingana maro amin’izany. « Anisan’ny dingam-piofanana ho mpampianatra ny fijerena na ny “Stage d’observation” . Amin’io fijerena io dia mandinika ny asa fampianarana ka midina ifotony any amin’ny Lisea ireo mpiomana ho mpampianatra. Herinandro vitsy aty aoriana dia manatanteraka “stage en responsabilité” izy ireo ka mandray an-tanana ny fampianarana mihitsy izay miara-miasa aminay tomponandraikitra eto amin’ny ENS sy ny “Maître de Stage”, ka raha tsy mahafa-po izy ireny dia afaka mamerin-taona amin’izay lafiny andran’asa izay.”Hoy i Ramatoa Marie Olga Razaiarisoa, izay mpiandraikitra sady mampianatra ihany koa (Hita amin’ny sary)
Miara-miasa amin’ny Toliary
Misy ny fiaraha-miasa manokana amin’ny Oniveristen’ny Toliary izay angady nananana sy vy nahitana ny taranja “fitiavana ny fahendrena” na ny filôzôfia teto amin’ny Nosy. “Ny Master dia hanana fifanaraham-piaraha-miasa amin’ny ENS Toliary, izay zokiny indrindra amin’ny taranja ambaratonga ambony mikasika ny filôzôfia eto Madagasikara . Nidina tany Toliary ny mpianatra Filôzôfia an’ny ENS Antananarivo ny 11 ka hatramin’ny 17 Desambra ny taona lasa teo, nanao ny “voyage d’étude” ka tapaka tamin’izay ny endrika fiaraha-miasa maro eo amin’ny sekoly ambaratonga ambony roa tonta. Anisan’ny efa fiaraha-miasa azo tsapain-tanana izao ny fanadinana am-bava ifaninanan’ny mpianatra ho ato amin’ny filôzôfia Ampefiloha amin’ity taom-pianarana vaovao ity izao. Efa nisy mpampianatra avy any amin’ny Oniversiten’ny Toliary niara-niasa taminay teto amin’ny ENS Antananarivo tamin’io adina am-bava io.” Hoy i Madame Marie Olga Razaiarisoa, (spécialiste en recherche sur l’imaginaire, l’anthropologie, la littérature comparée de Grenoble).
Nahazo tsikera nefa ity sampam-piofanana ho mpampianatra Filôzôfia ity tamin’ny fanombohany, noho ny mpiandraikitra ny taranja izay manam-pahaizana manokana amin’ny Antrôpôlôjia. “ I Emmanuel Kant, ilay andrarezin’ny fandinihana, Filôzôfa Alemana anefa dia nametraka fa tafiditra ao anatin’ny Filôzofia ny antrôpôlôjia.” Hoy i Ramatoa Marie Olga Razaiarisoa izay mpiandraikitra ny Filôzôfia ao amin’ny ENS, nanohy ny resany tamin’ny mpanao gazetinay. Marihina moa fa manana ny zony tahaka ny mpianatry ny Oniversite rehetra ny mpianatry ny ENS, toy ny vatsim-pianarana.